संयमता पहिलो पहिचान हो - Jhilko
जीवनका हरेक मोडमा अनेकन आउने गर्छन् । उतारचढावको कारणले गर्दा जीवन अगाडि बढने हो । उतारचढाव नभई जीवन अगाडि बढ्न सक्दैन । यउतारचढावसै गरेर हरेकको जीवन अगाडि बढेको हुन्छ । जीवनका उकाली ओराली र घुम्तीहरु नै जीवनका भोगाइहरु हुन् । जीवनमा उकाली ओराली गर्न नजान्नेहरु र घुुम्ती पार गर्न नसक्नेहरु जीवनलाई उठाउन सक्दैनन् । जीवनको स्तर उठाउनका लागि पहिले केही कष्ट ब्यहोर्नुु पर्दछ । महान् व्यक्तिहरुले महानता सहजै प्राप्त गरेका होइनन् । लामो कष्टपूर्ण जीवन तपमा व्यतित गर्न सकेका कारणले नै उनको जीवन सार्थक बनेको हो । यसको मतलव जीवन सार्थक बनाउन केही कष्ट झेल्नुपर्दछ । वर्तमानमा हामीले देखेका हरेक साधकहरु जीवनका उकाली ओराली पार गर्न सकेकै कारणले अहिले उच्चस्तरको सम्मानका साथ जीवन व्यतित गरिरहेको छन् । त्यो सम्मान घरमा बसेर विना साधना प्राप्त भएको होइन ।
जीवन सार्थक बनाउनुु छ भने जीवनका घुम्तीहरुमात्र होइन जीवनका गोरेटोमा आइपर्ने जंघार समेत तर्न पछाडि पर्नुु हुँदैन । जंघार तर्नुु भनेको उकाली ओराली र घुम्तीहरु पार गरेको भन्दा अलिक कष्टपूर्ण काम हो । धेरै मानिसहरु घुुम्ती पार गर्न मन पराएर पनि जंघार तर्न अलिक मन गर्दैनन् । जंघार तर्नुु कष्टपूर्ण मात्र होइन जीवन जोखिममा पर्ने पनि हुन्छ । किनकि जंघारले जीवन बगाएर बगरमा पुु¥याउन सक्छ । जंघार तर्न तम्सेका तर नसकेकाहरु कति त बगरमा उत्तानो परेका छन् भन्ने सुनिन्छ ।
वर्नमान परिवेश पार गर्नुु पनि जंघार तर्नुु जस्तै बनेको छ । संसार हल्लाउने कोरोना भाइरस (कोभिड १९)बाट पार पाउनका लागि एक प्रकारको कठोर तपस्यासँगै जंघार पार गर्ने तरिका पनि अपनाउन पर्ने भएको छ । एकान्तवासमा बस्नु र यसबाट जीवन सहज बनाउन जान्नुु जंघार तर्नुु जस्तै हो । यी दुुवै कुरालाई सजिलो गरी अवतरण गर्न सकिएन भने जीवन बगरमा पुुगेको जस्तै हुनेछ । एकान्तवासको पालना गर्न नसक्ने र यसलाई सहज बनाउन नजान्नेहरु यतिवेलाका खतराका सूचक हुन् । तप गर्न नजानेमा एकजनाको जीवन सार्थक नहुने मात्र हो । त्यस्तै जंघार तर्न नजान्ने पनि आफूमात्र समाप्त हुन्छ अरुलाई खासै असर गर्दैन । तर यसपटकको तपस्या भंग गर्ने र जंघार पार गर्न नसक्ने जति सबैले आफूमात्र नभएर अलिक धेरैको ज्यान जोखिममा पार्न सक्छन् । होसियार हुने यहिनेर हो ।
हामीले देखेको र भोगेको आधारमा भन्ने हो भने केहीलाई यो समय कष्टमय भएको छ उनीहरु एकान्तवासको पूरै पालना गर्न सकिरहेका छैनन् । यसबाट हुने नोक्सानीका वारेमा प्रसस्त सुनेर पनि त्यसको पालना गर्न नसक्नु भनेको उनीहरुमा संयमता छैन भन्ने नै हो । जुुन व्यक्तिसँग संयमता छैन त्यस्तो व्यक्ति जीवनमा समथर मात्र खोज्दछ ।
समथरमा हिंडेकाहरु न उकालो चढ्न सक्छन् न त ओरालो झर्न सक्छन् । जंघार त उनीहरुका लागि सोंच्दै नसोचेको विषय हो । जसले जीवनमा यस्ता उकालो र ओरालो पार गर्नु पर्छ भनेर सुुनेन र जानेन, बरु त्यसको साटो जीवन सधै समथरमा मात्र हिंड्छ भन्ने सोंच बनाएर बसेका छन । त्यस्तै लाछीहरुबाट उनीहरुको मात्र नभएर अरुहरुको जीवनले समेत धोका पाउने निश्चित छ । त्यतिवेला समय धेरै अगाडि बढिसकेको हुने छ ।
विश्वमा कोरोनाले पारेको प्रभाव हेर्दा र त्यहाँका नागरिकले गुमाएको ज्यानको संख्या हेर्ने हो भने भयावह अवस्था छ । मानव जीवन सानो कमिलोको भन्दा फरक भएको छैन । कमिलोको पनि जीवनको मूल्य त होला तर मानव जीवनको कुुनै मूल्य रहेको छैन । दैनिकरुपमा जीवन लीला समाप्त हुनेको संख्या हेर्दा दुई हजार भन्दा बढीको संख्या रहेको छ । यो हेर्दा मानव जीवन अमूल्य भन्ने बचेको जस्तो लाग्दैन । जति जनाले जीवन गुुमाए त्यहाँ पनि उकाली ओराली र जंघार तर्न कष्ट मान्ने असंयमी जीवहरुबाट भए होला भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन । जसले जीवनलाई संयम राख्न सकेन उनीहरुबाट बढ्ता जोखिम भएको अनुुमान गर्न सकिन्छ । जीवनलाई संयम राख्न नसक्ने भन्नुको अर्थ लकडाउनलाई कडाइकासाथ पालन गर्न नसक्नु वा नगर्नुु भन्ने नै हो । जहाँ पनि जहिले पनि असंयमीहरु न त आफ्नो जीवन आफै सार्थक बनाउन सक्छन् न अरुको जीवनको मूल्य नै जान्दछन् । जीवनको मूल्य नजान्नेहरुले आफ्नो जीवन त जोखिममा पार्छन,पार्छन अरुको जीवन समेत जोखिममा पारिदिन्छन् ।
यो घडीमा विश्वब्यपी कोरोना भाइरस कोभिड १९ले विश्व हल्याएको छ । त्यही हल्लाएका कारण पौने दुुई लाखको हाराहारीमा ज्यान गुुमाउनेको संख्या पुुगेको छ । यो सबै असंयमीका कारणले हो भन्न सकिन्छ । आफै पनि संयम रहन नसक्ने र अरुलाई संयम रहनका लागि उत्प्रेरित गर्न नसक्नेहरुको कारणले विश्वले यो क्षति व्यहोरिरहेको छ ।
सामाजिक दूरी कायम नगरेमा तिम्रो ज्यान जोखिममा पर्छ । तसर्थ सामजिक दूरी कायम गरेर हरेक कार्यकलाप गर भनेर हामीलाई अर्काले भनिदिन परेको छ । यो कस्तो विडम्वना हो ? त्यही भनेर पनि नमान्ने बुद्धि हामीसँग छ । एकपटक हामीले आफूलाई ऐनामा हेर्नै पर्ने छ कि म कति संयमी छु ? मेरो कर्तब्य के थियो ? मैले मेरो कर्तव्य पूरा गरे कि गरिन ? आफूलाई राम्ररी प्रश्न गर्नुु छ । हाम्रो समाज कस्तो छ ? हामी जथाभावी हिंड्डुल गरेमा सरसफाइमा ध्यान दिन नसकेमा हाम्रो जीवन जोखिमयुक्त हुन्छ भनेर अर्काले भनिदिनु पर्ने अनि त्यसलाई अविश्वास गरेर आफूलाई जथाभावी हिंडाइरहने हाम्रो छिमेकीको बुुद्धि हेर्दा मलाई त छक्क लाग्छ । यस्तै बुद्धिका ब्यक्तिले राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाए भने यो मुलुक कस्तो हुँदो हो ? आफ्नै जीवनको सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने कुुनै कष्टपूर्ण कार्य छैन । आवश्यक सामग्री सामाजिक दूरी कायम गरेर आफ्नै घरमा सुरक्षित साथ बस्ने भनेको त हो । तर यही कुरा अति कष्टपूर्ण भएको छ अनि आफै मुुद्दा फैसला गर्ने व्यक्ति र आफै उपचारमा संलग्न चिकित्सक होला भनेको जस्तै गरेर आफूलाई हिडाइरहन्छ । यसले देखाउने भविश्यमा हामी गम्भीर हुनु पर्दछ ।
वास्तवमा सबैजना संयम हुन जरुरी छ संयमता अहिलेको उपचार विधि हो । आफूलाई संयम राख्नु भनेको आफ्नो पहिचान दिनु हो । यो संकटबाट पार पाए पनि भोलिका दिनमा पनि त्यस्ता असंयमीको मूल्यांकन समाजले गरिरहनु पर्दछ । यो पनि एउटा विधि हो । धन्यवाद . १० वैशाख २०७७
दुई कोरोना संक्रमित निको भई घर फर्किए
बेलायतमा नयाँ कोरोनाको उपचार मलेरियाको पुरानो औषधिले शुरू
बेलायतको रोयल डेभन र एक्सटर हस्पिटलमा सन् १९५०को दशका पहिलो पटक फेला पारिएको मलेरिया...
छोरालाई चर्पीमा थुन्ने मेयरविरुद्ध आन्दोलन
विभिन्न नाराहरु लेखिएका ब्यानर तथा प्लेकार्डसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानियहरुले...
नारी दिवसकैदिन तेजाब प्रहार
तेजाब प्रहारबाट ५१ वर्षीया बेदमतीदेवी गुप्ता घाइते भएका छन् । गुप्ताको अवस्था सामान्य...